Ezona Colour zeenwele ziBalaseleyo kuMadoda | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, fashion, Isitayile esinenwele, Imizila
Ngaba ucinga ngombala owahlukileyo weenwele ophawula ubuntu bakho? Ukuba esi sisindululo sakho kwaye awazi ukuba ngowuphi umbala oza kuzinika iinwele zakho, apha sicebisa imibala efanelekileyo yeenwele yamadoda ethatha uninzi kwaye leyo unokuyiqhela ngokuxhomekeke kumdla wakho kunye ne-physiognomy.
Iithoni zeenwele okanye imibala ethathwa kakhulu zii-ash blondes, zingwevu, okanye ithoni ethile emnandi. Kodwa kunjalo zisondele kuphela kwabo banesibindi ngakumbi. Kubo bonke abo baneethoni eziqondayo, baya kuhlala bebheja kwabo banokunika injongo yendalo ngakumbi. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto ibonisa ukuba banike ukujija okuncinci kumfanekiso wabo.
1 Iingcebiso eziphezulu ngaphambi kokufaka umbala kwizinwele zakho
2 Eyona mibala yeenwele emadodeni
2.1 Faka umbala okanye ubala umbala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye nawuphi na umbala oqaqambileyo
2.2 Umbala weSilivere ongwevu okanye uthuthu
2.3 Imibala emnyama okanye yejet
2.4 Iithoni ezibomvu okanye zobhedu
2.5 Amagqabantshintshi e-Blonde, egolide kunye ne-caramel
Iingcebiso eziphezulu ngaphambi kokufaka umbala kwizinwele zakho
Ngaphambi kokufaka imibala kwizinwele zakho kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi eyona nto unokuthuthuzela ngayo ukuxhathisa kweenwele zakho kunye nethoni enokukuthanda. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke olo lwazi ezandleni zengcali eya kukunceda usombulule isimbo esifanelekileyo.
Ukuba umbono wakho kukufihla impandla, ungaze ubheje ngemibala emnyama kuba banokuqaqambisa ukusilela ngakumbi. Endaweni yoko, faka imibala ekhanyayo ngokombala wakho wolusu ukufihla izikhewu. Unokufaka iingcebiso zethu ekunweleni iinwele kwamadoda anempandla njengalawo sikucebisa wona apha
Ukuba esinye sezindululo zakho kukugubungela iinwele ezingwevu, kuya kufuneka ufake isicelo umbala ogquma ngokugqibeleleyo iinwele ezingwevu kwaye ayiveli komnye umbala xa uza kuyisebenzisa. Kungenzeka ukuba umthunzi okhethiweyo awufani xa uza kuwubeka ngaphezulu kwizinwele ezimhlophe.
Xa ulusu lwakho lufudumele kufuneka ukhethe I-hazelnut okanye i-caramel tints, endaweni yoko utsale ukubonakalisa kwegolide ukunika ukukhanya ebusweni bakho. Ukuba ithoni yesikhumba sakho iyabanda, unokuhlala uqaqambisa amanqaku obuso ngeetoni ezimnyama ezahlukileyo.
Kulaa shades ingwevu inxitywe kakhulu emadodeni, kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba iyafuna izinto ezininzi ezenziwe ngombala a priori. Ngaphambi kokufaka idayi yokugqibela kufuneka ulandele eli nyathelo kwaye ufumanise ukuba iinwele zakho zingayixhasa na. Obu buchule bunolwazelelo olufanayo ngemibala emnandi, kuba baya kufuna isiseko esimdaka ukuze bathathe ithoni.
Xa umbono wakho udidekile, ungathandabuzi ukufaka isicelo umbala nantoni na isigxina, ukwenzela ukuba ekuhambeni kwexesha ingahlali ihleli kwaye umbala uphele ngokuhlamba. Ekugqibeleni, musa ukulibala ukukhathalela umbalaYiba njalo, kubalulekile ukuba ezinye iidayi zibe nonyango olukhethekileyo emva kokufaka umbala.
Amadoda aqhelekanga ukutshintshela kwiidayi ezininzi zeenwele, bahlala bekwenza ngeethoni zendalo ukugubungela ezo ziphene ziye zafakwa ekuhambeni kwexesha ezinweleni zabo. Kodwa kufuneka sivume ukuba kukho ukuthanda kwayo yonke into kwaye kukho amadoda athanda ukuba nefashoni kwaye abe ngoovuyo bokwenyani:
Faka umbala okanye ubala umbala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye nawuphi na umbala oqaqambileyo
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka unesibindi kwaye uyila into emnandi, apho kufuneka uqale khona ukusuka kumanyathelo amaninzi okwenza iblowu ukuze ukwazi ukusebenzisa lo mbala. Imibala yeenwele ezimnandi yenzelwe ulutsha, abaphuli mthetho, abangazinzanga, Abathandi ukuphila ubomi obuqhelekileyo kwaye oko kuya kunika umfanekiso wexesha elizayo.
Umbala weSilivere ongwevu okanye uthuthu
Le toni isengcono kwaye unike lo mgca wobuhle, Umbala owamkelweyo nakweyiphi na iminyaka kwaye unokukhokelela kwiigrey ezininzi kuluhlu lwazo. Ukujonga oku kuya kufuneka uyazi ukuba kuya kufuneka uhambe ngenkqubo yokufaka umbala kwaye inokudityaniswa neenwele ezininzi. Ihlala ilungele zonke iithowuni zolusu, nangona ingenasiphako kulusu olufanelekileyo.
Imibala emnyama okanye yejet
Ayisiyiyo kuphela i-shades enombala omiselweyo, kodwa iithowuni ezimnyama zezona zisetyenziswa kakhulu, nokuba kungenxa yendalo yayo kwaye kuba igubungela iinwele ezingwevu. Ukuba awuthandi umbala kuba ubonakala umile kakhulu, ungongeza ukubonakaliswa okuthambileyo, kwegolide okanye kobhedu. Kumadoda athanda ukuba neenwele ezinde, lo mbala izisa amandla amaninzi kwaye ikhanye kwimane.
Iithoni ezibomvu okanye zobhedu
Ezi thowuni zimnandi, zinika i inkangeleko yobutsha kwaye uyithanda kakhulu ukuyinxiba kwiinwele ezigobileyo, ezijijekileyo kwaye ukuba inokuba neenwele. Ukuba ukhetho lwakho kukunika indawo yokubamba ebomvu ngakumbi kunesiqhelo, kuya kufuneka uyazi ukuba ihlala ingena ekuhambeni kwexesha, kodwa umbala uya kuhlala umhle kakhulu.
Amagqabantshintshi e-Blonde, egolide kunye ne-caramel
Lo mthunzi ungokwemvelo kwaye wongeza umbala omkhulu kwizinwele zakho.Ukongeza, ilungele loo madoda afuna ukwenza utshintsho oluncinci kwaye ayenze ngombala wokuqala. Ukuba uthanda ukwandisa ubungakanani betoni, ungayenza ibe blonde ngakumbi kunye neoksijini yeenwele zakho. Lo mbala ulungele amadoda anebala elifanelekileyo kuba uyanceda ukuthambisa amanqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Eyona mibala yeenwele emadodeni
Indlela yokwenza abahlobo kunye nefuthe kubantu